Lamjung Manang News | » माथिल्लो दोर्दी–ए मा मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ माथिल्लो दोर्दी–ए मा मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ – Lamjung Manang News
माथिल्लो दोर्दी–ए मा मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’
लमजुङ १८ असोज .
लमजुङको दोर्दी करिडोरमा निर्माणाधिन २५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दी–ए जलविद्युत आयोजनामा मुख्य सुरुङ निर्माणको काम सकिएको छ ।
भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण एकवर्ष ढिला भएको आयोजनाले बिहिबार छोटेखोलाको क्यूखोर भन्ने स्थानमा मूख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गरेको हो । आयोजनाको बिहीबार माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत आयोजनाका अध्यक्ष कुश कुमार जोशी र प्रवन्ध निर्देशक डा. आत्माराम घिमिरेले स्वीच थिचेर उक्त सुरुङको उद्घाटन गरेका हुन । उद्घाटन गदै कम्पनीका अध्यक्ष कुश कुमार जोशीले लक्षित समयभित्रै विद्युत उत्पदान गर्ने बताए ।
सरकारले ट्रान्समीसन लाइन निर्माण समयमै बनाउन पहल गरे आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत खेर नजानेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका सासद धनन्जय दवाडीले लमजुङ लगानीमैत्री जिल्ला भएकाले लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले भने गण्डकी प्रदेश अरु प्रदेशभन्दा जलविद्युतको हिसाबले पहिलो प्रदेश हो । प्रदेश सरकारले लिएको उज्यालो प्रदेश अभियानलाई सहयोग समेत पुग्नेछ ।
२०७१ देखि शुरु गरिएको आयोजनाको कुल २ हजार ६ सय २३ मिटर लामो भुमिगत सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको लिवर्टी इनर्जी हाइड्रोपावरका सञ्चालक राजेन्द्र वस्तीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्युतगृह र बाँधको कुल दुरी ५ हजार ४ सय ५७ मिटरमध्ये २ हजार ८ सय ५४ मिटरको भागमा पेनस्टक पाइप बिच्छ्याइएको छ । ‘हामीले ४ बर्ष अघिदेखि सुरुङ निर्माण शुरु गरेपनि भुकम्प र नाकाबन्दीका कारण १ बर्षपछि धकेलिनुप¥यो ।’ उनले भने, ‘ढिलै भएपनि मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न सफल भएका छौं । अब छिटै नै आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन शुरु हुनेछ ।’
प्रवद्र्धक कम्पनी लिवर्टीका निर्देशक डा. आत्मराम घिमिरेले आयोजनाको कुल प्रगति ८० प्रतिशत भएको बताए । ‘हामी आगामी मार्च महिनाभित्र आयोजनाको भौतिक निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौं ।’ उनले भने, ‘यसका लागि आयोजना निर्माण युद्धस्तरमा अघि बढिरहेको छ ।’
आयोजनाको सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको वाइबा इन्फ्रा टेकले ढिलै भएपनि आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्न सफल भएको जनाएको छ । प्रवद्र्धक कम्पनी लिवर्टीका अनुसार आयोजनामा बाँध र विद्युतगृहको ६०, पेनस्टक पाइपको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । दोर्दी गाउँपालिका वडा नं ६ ढोडेनी र ७ फलेनीमा निर्माण गरिएको यस आयोजनाले तल्लो सिमिस्थित लोदो खोलाको दोभानमा निर्माण गरिएको बाँधबाट ५ हजार ४ सय ५७ मिटर तल मालेबगरमा निर्माण गरिएको विद्युतगृहमा लगेर पानी खसाल्नेछ । १२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताका २ वटा पेल्टन टर्बाइन रहने यस आयोजनामा हिउँदको समयमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खाको समयमा ४ रुपैयाँ ८० पैसा रहने गरि प्रबद्र्धक कम्पनी लिवर्टी र विद्युत प्राधिकरण बीच विद्युत खरिद बिक्रि समझौता (पीपीए) भएको हो । कुल ग्रस हेड ३ सय २५ दशमलव ५६ मिटर रहेको आयोजनाले स्थानिय तहको विकासका ६ करोड खर्च गर्ने जनाएको छ । जसमध्ये हालसम्म साढे ३ करोड खर्च भइसकेको छ भने आयोजना निर्माण सकिएपछि २ करोड खर्च गर्ने आयोजनाको दावी छ ।
कुल ४ अर्ब लागत रहेको यस आयोजनामा ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत प्रवद्र्धकहरुको इक्वीटी लगानी रहेको छ । आयोजनामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अगुवाईमा नेपाल बैंक, ग्लोबल आईमई बैंक, सेन्चुरी कमर्शियल बैंक, ग्राण्ड बैंक, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक, प्रभु बैंक, एचएनबी डेभलपमेन्ट बैंक र एडीईपी डेभलपमेन्ट बैंकले लगानी गरेका छन् । ९ बैकले आयोजनामा २ अर्ब ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
आयोजनाबाट बार्षिक १३ करोड ८४ लाख १० हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिद्युत नेपाल विद्युत प्राधिरणले किर्तिपुरमा निर्माण गर्न लागेको १३२ केभी डबल सर्किटको सबस्टेशनमा जोडिनेछ । यता, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि आयोजना निर्माण चाँडै सम्पन्न गर्न प्रवद्र्धक कम्पनी लिबर्टीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । तर आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्दासम्म किर्तिपुरमा निर्माण गर्न लागिएको सबस्टेशन भने बन्नेमा शंका छ ।